Fizarana ny Tosika Fameno Lasa famoriam-bahoaka mihoatra ny 50 isa
Filaharana lavareny ny teny Alarobia omaly noho ny fizarana ilay Tosika Fameno 100 000Ar isam-pianankaviana ataon’ny fanjakana.
Tokantrano hatrany amin’ny 189 000 moa no hisitraka an’izany, ka ny Banky Iraisam-pirenena, ny Sampan-draharahan’ny Firenena Mikambana momba ny sakafo (PAM), ary ny FID no mamatsy ara-bola. Hatrany amin’ny 2 km na mahery ny filaharana nanomboka teo amin’ny LTP Alarobia, ka hatreny amin’ny Hotely IBIS omaly. Nifampitakosona tanteraka, ary tsy voahaja ny fepetra sy ny fiarovana ara-pahasalamana, toy ilay elanelana 1 metatra farafahakeliny. Tsy voafehin’ny fanjakana ny fandaminana, izay hitsaran’ny olona ny mpitondra ho manao tari-bato vilam-bava. Izao no tena ilàna ilay “digitalisation” sy ny fanangonana antontan-kevitra fototra (base de données) mirakitra ny mombamomba ny vahoaka. Ny Filoham-pirenena rahateo no niteny sy nampanantena an’izany ny 8 aprily, fa efa misy ny famatsiam-bola hahafahan’ny manao fanisam-bahoaka hatomboka amina faritra 3 (Analamanga, Antsinanana, Matsiatra ambony) ka hizarana “carte magnétique” ny olona. 10 andro no nambara fa hahavitan’io. Vita, ohatra, ny nanetsika ny tafika nizara tapim-bava, ka maninona no tsy ampiasaina ny Paositra izay manao ilay «Paositra money » rahateo ao anatin’ny fizarana ity vola ity ? Inona ny olana tsy nahafatsanganan’ilay Komity loharano, izay azo hampiasaina hitsinjara izany isam-pokontany. Tany aloha nilaza ny Filoha fa mety alefa amin’ny « mobile money » ny fanampiana. Ny famoriam-bahoaka mihoatra ny 50 tsy azo atao, ny taksibe tsy hanisy olona eo amin’ny seza afovoany,… fa ny famoriam-bahoaka an’arivony ataon’ny mpitondra tsy olana, satria mety ilaina amin’ny tombotsoa politika ihany koa angamba.